Maitiro ekuita yedu keyboard kurira chekare muGnu / Linux | Linux Vakapindwa muropa
Avo vedu vane makore anopfuura gumi nemashanu ekuberekwa, vanofara kuyeuka zvekare zvishongedzo zvemakomputa. Iyo yekare bhora mbeva kana iyo yakasimba pc keyboard iyo yaipikisa chero kurohwa asi zvakare yakaita ruzha rukuru painoshandiswa. Parizvino, chero mbeva hadzina bhora rekuita kana makibobhodhi akanyanya kudaro. Asi isu tinogona kuvaita kuti vaburitse ruzha, tisingavatyora.
Iko kune kunyorera kunogona mhanya pane chero kugoverwa kweGnu / Linux uye chii chinoita kuti komputa emit kurira kwekiyi yega yega isu tinodzvanya, sekunge yaive yekare keyboard. Ichi chishandiso chiripachena uye hachisanganisiri mari zhinji yekushandisa, saka zvinobatsira zvese kumakomputa ane zviwanikwa zvishoma uye kune avo vane zviwanikwa zvakawanda.
Iyo yekare computer keyboard yakaita ruzha rwakawanda asi yakashanda kwenguva yakareba
Chirongwa ichi chine chekuita nekuburitsa ruzha chinonzi bucklespring uye inogadzirwa na programmer Zevv. Uyu anovandudza akagonesa chinyorwa cheGithub kuitira kuti utore kodhi yekushandisa. Asi kana isu tine mugove unotsigira snap mapakeji, tinogona kuisa kunyorera seinotevera:
Uye kamwe isu tine chirongwa chakaiswa, isu tinongofanirwa kuchimhanya nenzira inotevera:
Kana kugovera kwedu kusingatsigire snap mapakeji, saka isu tinofanirwa kurodha pasi kodhi yacho uye kuiisa seinotevera:
Uye sekufanana neiyo snap package, isu tinofanirwa kuitisa iyo bucklespring.buckle raira kuti marira abudiswe nekiyi kiyi yatinodzvanya. Isu tinowanzo gadziridza kugovera kwedu ne icon nyowani, yakasarudzika desktop desktop kana nekuchinja desktop. Asi mitinhimira zvakare chikamu cheyakanaka maitiro uye vazhinji vedu tinoikanganwa. Chirongwa ichi chingasaita kuti tive vakakosha, asi chichatiyeuchidza nezvekuti machibhodhi emakomputa akashanda sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuita yedu keyboard kurira yekare muGnu / Linux
Mune yangu kesi ini ndine yekare khibhodi iyo inoshanda zvirinani kupfuura izvo zvazvino zvei i7 yangu naDebian nemumwe.
KUSHANDA KUNENGE KAKachengeteka?